Tany Arabo:Vehivavy, tokantena, handao ny akany? · Global Voices teny Malagasy
Nivoaka ny 12 Aogositra 2008 19:30 GMT
Ho an'ny ankamaroan'ireo vehivavy tokantena arabo, ny hiaina sy hiasa na handranto fianarana lavitry ny fianakaviana dia safidy tsy mora atao, noho ny tahotra ny hoe “Dia inona no ho lazain'ny olona”. Manerana ny tontolo arabo, vehivavy mpitoraka blaogy maro no efa naneho ny ahiahiny mikasika ny olana sedrain'ireo vehivavy tokantena.
I Rambling Hal, monina any Amman ary mpitoraka blaogy ao amin'ny Rants and Rambles, dia nanapa-kevitra hanaiky tolotr'asa any Abou Dhabi :
Sao misy amintsika azafady, MIANGAVY AHO, mba afaka hanazava amiko hoe INONA no tena mahahenjana, ny tena maha ratsy, ny tsy mahamety ny maha-vehivavy be nofinofy (tanjona) manana ny fahaiza-manao, ny faniriana sy ny fientanana handeha hiorim-ponenana any amina firenana hafa iray any Moyen-Orient ka hiaina ny fiainana maha tokantena azy any toy ny mpiasa nafàrana (expatriée) (oay mahatsiravina, oay manafintohina), noho ny traikefa fotsiny? Ary tsy hoe firenena iza akory fa dia ny EMIRATS ARABES UNIS mihitsy miaraka amin'ireo sarangam-piainany sy ny fitoniany, ny filendalendana aterany raha asa no asian-teny ary ny fampitoviana laharana azy amin'i ‘Soisan'ny Moyen-Orient’. […] Raha izaho manokana sy ny fianakaviako akaiky no mifankahazo resaka, mifanohana ary manaiky ny fanapahan-kevitro HANORINA FIAINANA AHY MANOKANA (HANDRAY AN-TANANA SAMIRERY NY FIAINAKO), tsy teliko marina mihitsy ny fomba fijery vilan'ity fiaraha-monina ity izay manery antsika hihinana am-bolony ny fitsaratsaram-poana diso toerany sy ny fahatsapana mitanilany momba ny fetra sy ny fomban-drazana ara-piaraha-monina nolovaina. Ny hany tokony hibahana ao an-tsaina ny alahelo noho ny fisarahana (sy ny fangoronana ny kiraroko) fa TSY ‘izay ho lazaina na hosainin'ny olona’ velively.
Olona manana tetik'asa aho. Tsy hitorevaka fotsiny eo aho hanonofy fa any andro iray ho tanteraka ireny. Tsy maintsy hiezaka aho ny hahatanteraka ireny ary hifofotra aho mba hisy zavatra mijoro mandritry ny androm-piainako. Raha izany no hahatonga ahy ho olona tsy ampiampy saina, hafa noho ny rehetra, sy voaozona hitsotsorika amin'ny lalana ratsy mitondra any amin'ny helo, olona tsy azo antoka, mivika satria olona manome lamosina ny fiadanana rehetra omen'ny fiainana lavitr'izay mety ho fandraisana andraikitra, olona nivily làlana koa aza angamba… tsy maninona, izay izany.
Avy any Arabia Saodita i Hala ary monina tsy ela akory izao any Etazonia , mitoraka blaogy ao amin'ny HALA_IN_USA; izy no mizara amintsika ny zava-niainan'ny iray amin'ireo namany tokantena miasa any Riyad, lavitry ny fianakaviana, ary tsy maintsy nizaka nandritry ny fotoana maharitra ny faneriterena (tsindry hazolena) nataona lehilahy iray, izay tsy hitany loatra izay anaovana azy. Hoy i Hala mamehy izany :
Mitsetra ireo tovovavy tokantena miaina irery ao anatin'ny tontolo najoron'ny lehilahy aho… Vaha olana naroson'ny reniko ny handehanana manambady ary ny zokiko vavy dia nanoro hevitra ahy mba hanarona voaly ny endriko ho mariky ny fikasana tsara ananan'ny vehivavy sy ho fanafenana ny aminy (hoe iza izy) … dia nanontany tena aho hoe, na teo aza ny ezaka maro nataon'ny vehivavy ho fisorohana ny teritery (tsindry hazolena) eto, tsy nahatohitra ny rabirabin'ity lehilahy ity ilay namana iray ity, tsy dia nasiana lanja loatra izay heviny… Afaka tonga dia lazaina ve fa ny vehivavy dia afaka miara-miasa amin'ny lehilahy raha toa ka tsy hajaina sy faritana mazava tsara ny zon'izy ireny? Tsy maintsy hasiana fanentanana eraky ny firenena ve mba hanentanana ny lehilahy momba ny zon'ny vehivavy, indrindra fa eny amperin'asa, sy momba ny lalàna henjana mba tsy hanaovana z'inona ny vehivavy? Ny tahotra ny ho very laza amam-boninahitra ve no hisongona ny fiarovana ny tena manokana? Tontolom-piaraha-monina henjana sy be moraly ve no misy antsika? Ary ahoana no hanovantsika fomba amam-panao efa tena latsa-paka, manery ireo vehivavy manana ny hàjany sy tena anatin'ny finoana ho ailika anjorom-bala, apetraka ambany fiadidiana sy rakofana manontolo voaly, hankany amin'ny fomba amam-panao feno fitsimbinana ny vehivavy?…
Ho faranantsika miaraka amin'i Eman izay manoratra ao amin'ny Hatshepsut, haftra mitondra ny lohateny hoe ‘Overheard in Cairo‘ (‘Resaka heno tao Caire’):
Tovovavy 1: Ha ! Dia handeha hianatra any ivelany mandritry ny firy taona izany indry?
Tovovavy 2: 5 taona.
Tovovavy 1: Woow ! DIMY TAONA ! Be loatra izany an !
Tovovavy 2: K'ah, hanao doctorat anie aho e… Indry koa aza tokony hanao fangatahanai.
Tovovavy 1: Mmm, tsy haiko, tsy mino aho hoa haniky ny hipetrahako irery any an-tanin'olona any ny dadako mandritra izany fotoana ela be izany.
Tovovavy 2: Fa nahoana ?
Tovovavy 1: K'ah, hain-dry ihany, noho izay mety ho filazan'ny olona.
Tovovavy 2: Inona no mety hambaran-dry zareo k'ah ?!!
Tovovavy 1: Hain-dry e… “Tovovay nipetraka irery nandritry ny fotoana maharitra iny”… “Andriamanitra irery no mahalala izany nataony tany”… Hitan-dryy, zavatra toy izany…
Tovovavy 2(sadaikatra): Zay izany, tsy misy afa-tsy ny olona tsy misy fandeferana sy manana fisainana mivika no hisaina toy izany, ary amiko dia tsy tokony hihaino azy ireny akory izay olona mahay mandinika sy mandanjalanja.
Tovovavy 1: Ekeko, nefa ny zavatra toy izany dia mety hiantraika hatrany amin'ny vintana tokony hanànana tokantrano ary izany no tsy haneken'ny raiko azy.
Tovovavy 2: Hay, tsy te-hanambady olona tsy ampy saina sy borné kosa angamba aloha indry e, sa ?